I-Thijs H. PsyOp kwafuneka yonakalise ukufihla kwezobugcisa kwaye sele sele iyenziwe namhlanje: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	3 Juni 2019	• 8 Comments
Kunzima ukuqhubeka kunye nemisebenzi eninzi yengqondo (PsyOps) ngoku uhamba ngeenxa zonke. Ndandixelele ukuba izinto ezifana neye-Anne Faber zifanele zikhokele ekuqalisweni kwe-app 'joint search'. Namhlanje sibona ukuqaliswa kwaloo app iqhutywe yiendaba; apho batshintshe igama elithi 'Sherlock', ukuze umfundi xa i-Googling kuleso sicelo ingapheli kwiwebhusayithi kaMartin Vrijland kwaye ifumanisa ukuba yayilungiselelwe ixesha elide.
Ukusebenza kweengqondo (PsyOps) zisetyenziselwa ixesha kunye nexesha ukuzisa imithetho nemigangatho emitsha. Injalo insiza ibonakala iluncedo, kodwa ngokwenene yenza ubulungisa besiqingatha saseNetherlands kungekhona kuphela inhloli, kodwa kwakhona ikunika amalungelo okusebenzisa ikhamera, imakrofoni kunye nendawo, ukuze ukwazi ukuzithobela ngokusemthethweni.
Kwinqaku lam elivela kwi-29 ngoMeyi wokugqibela, ndinike isishwankathelo esifutshane sokuba onke abo matyala okubulala eminyaka edlulileyo kufuneka aholele kumthetho omtsha namanyathelo. Zifunde kwakhona kwakhona (apha). Ndandixelele ukuqaliswa kwe-app kwi-18 Disemba 2017 . Enyanisweni, kuzo zonke izinto, into endiyithethileyo yenzekile, kodwa kubonakala ngathi ukuxhomekeka kweendaba kunamandla kangangokuthi akusayi kuba nzima nokuba uyayityhila inyaniso; Abantu abafuni nje ukuva okanye bayibone.
Okwangoku sifudumala kwakhona kunye necala elingekho (Anja Schaap), ukuze sikwazi ukukhuphela loo app entsha. Kwakhona ukukhangela enye pyromaniac e Gouda, mhlawumbi unceda ngokusungula okukhawulezayo kweso sixhobo sobuqili. Ewe, ngokuqinisekileyo sibona omnye umfanekiso we-missing Anja Schaap kunye nemililo yinyani kakhulu, kodwa nini abantu baqala ukuqaphela ukuba sidlalwe ngeengxaki ezidaliweyo; Iziganeko zokubulala ezizimeleyo ezenziwa ngabantu abakhulu ngokubakho ngeendlela ze-studio ze-studio (kunye nesofthiwe elula) njenge "fake"?
Ngesofthiwe elula yokukhuphela ungenza umntu ongekho kwaye wenze yonke imbali; kuquka ubungqina bevidiyo, iifoto kunye nabahlobo kunye nabaqhelana nabo baphelelwa ebomini ngokusebenzisa iindlela zokucoca (nqakraza esi sixhobo kwaye ubone indlela esebenza ngayo). Umbukeli weTV okanye umsebenzisi we-Facebook uya kucinga ukubona imifanekiso ebonakala ngathi iphila. Kwaye ngoko unako ukuzisa abantu ngokukhawuleza kwimodi yokwamkela imithetho emitsha. Kufuneka umzamo.
Njengoko kuthethwe, ndandixelele nge-29 Kwangathi loo mfihlelo yobugcisa yayiya kuphazamiseka. Namhlanje sifunda de Telegraaf:
Kwiveki eledlule inkundla yaseLimburg yanquma ukuba iManrian ifanele ibelane ngemifanekiso yekhamera kaThijs H. kunye namagunya okugweba ukuze kuphandwe uphando. Iklinikhi ayifuni ukubonelela imifanekiso ngaphambili ngenxa yobumfihlo bezokwelapha. Kodwa ijaji yalawula ukuba le lungelo lifanele linikezele ekubaluleka kokufumana inyaniso. "Ndiyaqonda ukuba i-OM ifuna ukubona imifanekiso kwaye ithathe isigqibo senkundla isaziso."
Igosa elithatha into yokuba umthetho uphulwa yinkundla yesaziso? Oko kungenye into ebonisa ukuba sisaphinda sisebenzisana necala le-PsyOp. Ngaphambili kuleso sigwebo sikaJos Brech sabona indlela ummeli uGerald Roethof avumele ngayo ngaphandle kokuchasiswa ukuba i-DNA efunyenwe kwimeko ephosakeleyo yayisetyenziswe kwimeko yeNicky Verstappen (ngokungekho nto ityala lokubulala, kuba kungekho bubungqina bokubulala). Kukho, kwakhona, umthetho waphulwa ngaphandle kokulwela. Oku kunjalo kuphela kwaye kwamkelwa kuphela, ngenxa yokuba imisebenzi yokusebenza kwengqondo iye yakhankanywa ngenxa yaloo njongo: ukulungiswa komthetho ongeke wamukelwa. Ngama-avoya angqinelana ne-PsyOp, abakhohlise amahlombe abo ngenxa yokuphulwa komthetho, konke okufuneka ukwenze ukuguqula umyalelo wamatyala kumhla omtsha kwaye uyenziwe.
Uludwe lwekhonkco lovimba: rtlnieuws.nl, rtlnieuws.nl, nieuwsopbeeld.nl, telegraaf.nl
tags: advocaat, Anja, Anne, app, ukufihla, Faber, eziziimbalasane, H., psyop, kunye, Iigusha, USherlock, Thijs, ekhoyo, lungelo lomthetho, ukufumana inyaniso, mithetho, ukukhangela
3 Juni 2019 kwi-13: 19
Uyazi ... ezo mpendulo kwiindaba zentlalo ezivela kubantu abathi bayazi i-protagonist. Yileyo ndlela isebenza ngayo. Umsebenzi we-PsyOp uhlolwe kwiimidiya zentlalo ngamabutho aseTroll: abantu abaya kuzisa ukuba bayazi abantu.
Masibe socace: awukwazi ukujonga nayiphina iprofayili yeendaba zoluntu ukuze ubone ukuba ngaba abantu bakhona. Nangona banoluhlu lwabahlobo okanye bathanda kwiifoto zabo / iividiyo; nangona banezithombe zentsapho, iividiyo, iifoto ezidlulileyo, njl. Konke oku kunokwenziwa ngokulula nge software. Leyo iyure leeyure zomsebenzi ukuze zenzeke abakhi. Abahlobo, abantwana, abazali, njl njl. Nazo zingaba yi-deepfakes kunye / okanye Inoffizieller Mitarbeiter (i-trolls).
Iimpendulo zeendaba zoluntu zingasayi kuthathwa ngokungathandabuzekiyo, ngenxa nje yecandelo lobugcisa lokuba liyingxenye yesenzo se-psyop obeka iliso kwingxoxo yeendaba zentlalo nge-profiles profiles kunye / okanye Inoffizieller Mitarbeiter.
3 Juni 2019 kwi-13: 29
Owe ewe kwaye "ndibe ndilandela emva kweminyaka" ngumhlathi ovakalayo wokuvula i-psyop yokulinda ama-troll
3 Juni 2019 kwi-14: 21
Ukuba igqwetha lithetha ukuba uyamkela isaziso enkundleni ngenxa yesaziso, kuthetha ukuba akayi kwenza nantoni nayo okanye ngoko uyayifumana isaziso kwaye awusekho.
3 Juni 2019 kwi-14: 34
Ewe, oku kunjalo ndizama ukucaca.
3 Juni 2019 kwi-18: 06
Awu uthetha iGouda, esi sixeko samakhandlela 🙂
Yintoni ebetha ukuba imoto engumakhelwane igcinwa rhoqo. Yonke imililo iyimililo yomlilo kwaye iyacima nje ngexesha ngaphambi kokuba isiqithi okanye imoto isondele umlilo, ilawulwa kakuhle, ithi, igcinwe? 😉
3 Juni 2019 kwi-18: 15
Awu, kungekhona umlilo ngomlilo apha, umqolo wonke weemoto ugqityiwe. singabi nantombazana, simele senze ntoni
ukwenza oko ukukhusela oku kungenzeki ngonaphakade?
Ndivuka wabhala wathi:
3 Juni 2019 kwi-19: 52
Indlela esebenzayo ngayo yonke into iboniswe ngokubanzi kwi-movie I-Circle. Ayikho inzululwazi eqingqiweyo, kodwa nje ukufumana abantu basebenzise kulo mdlalo. Ndiye ndithetha oku kuba ndabona ifilimu.
3 Juni 2019 kwi-19: 53
Ndiyathetha i-app espionage.
« Ikhonsathi emnandi kaMarco Borsato eKuip eRotterdam!
U-Anja Schaap ulahlekile sele ebonakalise i-PsyOp? Bona apha kutheni (ividiyo) »
Utyelelo lulonke: 4.143.554